China AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen အောက်ခြေအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူသန့်ရှင်းသောအရသာနှင့်အခိုးအငွေ့ကြီးသောကြွေပြားများမကြီးသည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Alphagreen vape
AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen နှင့်အောက်ခြေအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းထုတ်လုပ်သူကြွေကွိုင်မရှိပါ။
အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်： ကျွန်ုပ်တို့သည် AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး vape pen ကိုထုတ်လုပ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပစျေးကွက်အများစုကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် BIG လိုင်စင်ရဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၌သင်၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
F0B စျေးနှုန်း: US $ 1.85 - 2.0 / Piece
၏ 1. ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း AD03CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen
AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး vape pen သည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်တည်ငြိမ်သောတစ်ခါသုံး vape pen တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါသုံး vape pen အသေးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဆေးလိပ်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ဖန်တင့်ကန်ကြွေပြားများ၊ ခဲနှင့်ကင်းသောကြေးဝါနှင့်အဆင့်မြင့်ဝါဂွမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အကြီးမားဆုံးသောရေနံအပေါက်ပေါက်သည် ၁.၇ မီလီမီတာဖြစ်သော်လည်းအထူးတည်ဆောက်ပုံကကောင်းမွန်သောစုပ်ယူမှုနှုန်းကိုပြုလုပ်သည်။ သေးငယ်တဲ့ရေနံပမာဏကိုသုံးပါ၊
ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောဘတ္ထရီ ၃၅၀mAh စွမ်းရည်ရှိသည့် A တန်းဘက်ထရီကိုအသုံးပြုသည်။ ဂရမ်ရေနံတစ်လုံးတည်းပျက်စီးရန်လုံးဝလုံလောက်သည်။ အကြောင်းမှာသိုလှောင်နေစဉ်အတွင်းဘက်ထရီအားလျော့နည်းစေသည်။ အောက်ခြေရှိဆိပ်ကမ်း။ ဒါကြောင့်သင်ဘက်ထရီပြproblemနာကိုဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။
2. ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen
CBD / THC vape ကျည်တောင့် / AD03
: D 10.5mm & L ကို 94.3 / 106mm
၂ * ၁.၀ မီလီမီတာ / ၁.၅ မီလီမီတာ / ၁.၇ မီလီမီတာ （စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား）
ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်လျှောက်လွှာ AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen
—High စုပ်ယူမှုနှုန်း၊ ဆီအဆီအတွက်သင့်တော်သည်။ (ရေနံအ ၀ င်ပေါက်အပေါက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
4. ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ် AD03 CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen
TH THC သို့မဟုတ် CBD ဆီ၊ 0.5ml & 1.0ml tank tank အလွယ်တကူထိုးနိုင်သည်။
②လုံး ၀ မလေးသည်။
⑤ Mini type၊ ၁ ဂရမ် ၁၀၆ မီလီမီတာသာရှိသည်။
⑥ 350mAh စွမ်းရည်ကြီးမားသောဘက်ထရီ၊ တစ်ဂရမ်လျှင်လုံလောက်ပါသည်။
the အောက်ဘက်ရှိ charger port ။
ရှေ့သို့ AD01-2 CBD / THC တစ်ခါသုံး Vape Pen ထုတ်လုပ်သူကြွေထည်ကြွေပြားကပ်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသော Heavy Metal နှင့်သန့်ရှင်းသောအရသာနှင့်အခိုးအငွေ့
နောက်တစ်ခု: AD10 CBD / THC သီးသန့် Vape ဘောပင်အောက်ခြေအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းထုတ်လုပ်သူကြွေထည်ကြွေပြားမသန့်ရှင်းသောအရသာနှင့်အခိုးအငွေ့ကြီးသော
တစ်ခါသုံး cbd ရေနံ vape
ကြွေ vape ဘောပင်
တစ်ခါသုံး vape ကလောင်
အားပြန်သွင်းနိုင်သော vape ဘောပင်
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, vape ကလောင်အမည်, ဘက်ထရီ vape ကလောင်, တစ်ခါသုံး vape ကလောင်, 510 ဘက်ထရီ, တစ်ခါသုံး cbd ရေနံ vape, အားပြန်သွင်းနိုင်သော vape ဘောပင်, ထုတ်ကုန်အားလုံး